सि. एमको स्मृतिमा दुई साहित्यकार सम्मानित हुने - Pradesh Dainik
सि. एमको स्मृतिमा दुई साहित्यकार सम्मानित हुने
सोमबार, बैशाख २३, २०७६ , प्रदेश दैनिक
सि. एम (चन्द्रमान) कन्दङ्वाको स्मृतिमा पूर्वका दुईजना साहित्यकार सम्मानित हुने भएका छन् । सि. एम कन्दङ्वा स्मृति कोषबाट बैशाख २६ गते हुने एक कार्यक्रममा गीत तथा संगीतकार एिल. पी जोशी र साहित्यकार धनकुटे कान्छा (शंकर चापागाँई) सम्मानित हुने भएका हुन् ।
मोरङ पथरीशनिश्चरे १ मा रहेको एभरेष्ट आवासीय मा.विका संस्थापक सि.एमको स्मृतिमा उनका छोरा तथा एभरेष्ट आवासीय मा.विका निर्देशक रविन कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा “सि. एम कन्दङ्वा स्मृति कोष” खडा भएको छ । सोही कोष अन्तरगत खर्च हुनेगरी स्थापना गरिएको “सि. एम कन्दङ्वा राष्ट्रिय विशिष्ट प्रतिभा सम्मान २०७६” बाट गीत तथा संगीतकार एल.पी जोशी सम्मानीत हुने छन् । यसैगरी “सि. एम कन्दङ्वा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान २०७६” बाट साहित्यकार धनकुटे कान्छालाई सम्मानित गरिने संयोजक कन्दङ्वाले बताए ।
जोशी नेपाली लोकगीत तथा संगीतका क्षेत्रमा लामो समय देखि तल्लीन रहेका छन् । जोशीका (खिखि मा खिखि नी बिनायो बाजा, वल्लो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको गोलो, रिटिङ रिटिङ नबजाउ बिनायो) जस्ता चर्चित गीतहरु रहेका छन् । यस्तै धनकुटे कान्छाका ४ वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन् । उनका “लाशमाथी एउटा बच्चा” गजल सङ्ग्रह, “इतिहांस निफनेर” कविता सङ्ग्रह लगाएतका जम्मा ४ वटा कृति प्रकाशित छन् । धनकुटे कान्छा हास्य कलाकारका रुपमा, सञ्चारकर्मीका रुपमा पनि चिनिने गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला उनि नेपालमा सबैभन्दा वढी चराको आवाज निकाल्ने मान्छेका रुपमा मिडियामा आएका थिए ।
विशिष्ट प्रतिभालाई नगद ५० हजार र ताम्र पत्रले सम्मान गरिने छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रतिभालाई ३५ हजार नगद र ताम्र पत्रले सम्मान गरिने संयोजक कन्दङ्वाले बताए । कार्यक्रम बैशाख २६ गते एभरेष्ट आवासीय मा.विको हलमा हुने जनाइएको छ । सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा उप्रेतीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको पनि कन्दङ्वाले बताए । सो कार्यक्रममा प्रदेश १ का चर्चित कविहरुका प्रतिनिधि रचनाहरु समेत वाचन हुने जनाइएको छ ।
सि.एमका बारेमा छोटो जानकारी
सि.एम कन्दङ्वा अर्थात चन्द्रमान कन्दङ्वा एक साहित्यकार, प्रजातन्त्रका सेनानी हुन् । उनले शिक्षाबाट समाजको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर शैक्षिक रुपमा अभियान चलाइ रहेका बेला २०४३ सालमा एभरेष्ट आवासीय मा.विको स्थापना गरेका हुन् । जीवनभर नै वर्गीय असमानताका विरुद्धमा आवाज उठाइरहने सि.एमले प्रगतिवादी चिन्तनमा साहित्यको सिर्जना गरेका थिए । १९८५ सालमा जन्म भइ विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कर्मथलो बनाएर पछिल्लो समय पथरीमा बसोबास गरिरहेका सि.एमको २०६२ सालमा निधन भएको थियो । हाल उनका छोराहरुले उनै सि.एमका नाममा विभिन्न स्मृति कोषहरु स्थापना गरेर सि.एमको सपनालाई साहकार पार्ने काम गरिरहेका छन् ।